Allgedo.com » 2012 » November » 07
Home » Archive Daily November 7th, 2012
Gudoomiyaha Jaaliyada Somalida ee Turkiga oo Hambalyo u direy Golaha Wasiirada Cusub
Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalidda ee dalka Turkiga Mudane Xoosh Cabdi Aden oo ku hadlaya magaca Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga iyo magaciisa oo la soo xariiray Warbaahinta ayaa soo dhaweeyay magacaabista Golaha Wasiiradda Cusub, isagoo Ilaahay uga baryey inuu u fududeeyo hawlaha culus ee loo magaacabay, kana codsaday Baarlamaanka inay codkooda siiyaan. Gudoomiyaha ayaa si qaas ah fariin ugu dirayo...
Qaraxyo goordhow ruxay meel aan ka dheereyn guriga barlamaanka ee Muqdisho
Dhawaqa Qarax xoogan ayaa goordhow laga maqlay agagaar masjidka Isbahaysiga ee magaalada Muqdisho halkaasi oo kasoo horjeeeda howlka ay ku shiraan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Qaraxa ayaa ahaa mid xoogan kaasi oo la sheegay in ilaa iyo iminka aan la ogeyn qaabka uu ahaa. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid laga soo buuxiyay labo gaari oo lagu qarxiyay goob ay gaadiidka...
Isgaarsiintii Kismaayo oo hawada laga saaray iyo Wafdi ka socda IGAD oo gaaray
Waxaa goordhow oo maanta ah magaaladda Kismaayo ee xarunta goblka Jubada Hoose gaaray wafdi ka socda Urur goboledka IGAD. Wafdigaas ayaa waxaa si weyn magaaladda ugu soo dhaweyay Saraakiisha dowlada, Raaskambooni iyo ciidamada Amisom ee magaaladda kusugan. Wararka aan helayno waxaa ay sheegayaan in ciidamada amaanka ay haatan wadaan howlgalo iyadoona ay istaageen isi socodkii dadka iyo gaadiidka. Sidoo...
Boosaaso: Maxkamad dil ku xakuntay nin dilay saaxiibkiis
Maxkamad kutaal Magaaladda Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta dil toogasho ah ku xakuntay nin qirtay inuu si xun udilay saaxiibkiis ay isku dhawaayeen gudaha magaaladaas. Xuseen Xaaji Yuusuf Dhicin oo shalay nin ay Saaxiibo ahaayeen ku gowracay Magaalada Boosaaso ayaa maanta xukun dil ah lagu xukumay kadib markii Maxkamad lasoo taagay. Dhicis oo shalay si arxan darro ah u googooyay Saaxiibkiis...
Xiisado dagaal oo ka jira Buurdhuubo iyo ciidamada huwanta oo kusii jeestay
Wararka naga soaoa gaaraya Magaaladda Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaas ay ka jirto xiisad udhaxeysa ciidamadda dowlada iyo Shabaab. Saraakiil katairsan ciidamada dowlada ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in ay gaaraan magaaladda Buurdhuubo oo ah degmada labaad ee ay Shabaab kaga sugan yihiin gobolkaas marka laga tago Baardheere. Dhanka kale Afhayeenka AHlu Sunna Waljamaaca...
Askari katirsan ciidamada dowlada oo toogasho ku dilay Nin Darawal
Mid kamid ah askarta ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay Nin la sheegay inuu kamid ahaa darawalada ka shaqeeya Magaaladda Muqdisho. Rasaas xoogan ayuu askarigan ku furay marxuumka xili uu taagnaa isgoyska Banaadir iyadoona ay warar kala duwan kasooa baxayaan qaabka uu dilkaas udhacay. “Askari katirsan ciidamada dowlad ayaa dhowr xabad ku dhuftay darawalka kadib markii uu khilaaf...